ropa Nzvimbo Dzine
Kana akamumutsira faira yako pane zvitatu zvinokosha kuyeuka:
Trim nzvimbo: Iri kukura Trim peji saizi. Icho saizi yakapedza bhuku rako achaitwa kupetura kuti, kureba uye kureba peji.
Ropa: Ndicho nzvimbo kuti kunosvika mhiri Trim mutsetse. Kana uine background, mufananidzo kana magadzirirwo chaikosha kuti unoda ropa papeji, unofanira kuwedzera ichi ne 1/8 "(3 mm) mhiri Trim mavanga.
Safe nzvimbo: Chengeta rwezuva mabhokisi uye misoro zviri yakachengeteka nharaunda, iri shoma 1/8 "(3 mm) kubva Trim nzvimbo.
The aidhinda achitungidza zvavakatemerwa mapeji pamusoro jira, naizvozvo zvakakosha kumisa bleeds vose 4 kumativi peji.
Nokuti Tinonyanya ari Profiles vanofanira kushandiswa kwemifananidzo Photoshop, kwete InDesign:
Paunenge uchigadzirira wako mufananidzo mafaira muna Photoshop, sarudza kubva Edit / Exchange kuti Profile uye kusarudza mumwe zvinotevera kubva donhwe pasi Muterere:
• For GRACoL , Adobe Nhoroondo: Coated GRACoL 2006 (ISO 12647-2: 2004)
• Nokuti FOGRA zvemapuranga, Adobe Profile: Coated FOGRA39 (ISO 12647-2: 2004)
• Nokuti FOGRA uncoated, Adobe Profile: uncoated FOGRA47 (ISO 12647-2: 2004 )
Dzokorora nhungamiro muchikamu chino kubatsira kugadzira mafaira ako zvakarurama sezvingakwanisika. Izvi zvichakubatsira kudzivisa zvikanganiso panguva preflight. Kana usina chokwadi kuti mafaira ako akamisa nemazvo tapota nyorera rokutengesa yenyu Executive mazano.
Application Files akabvuma:
• Adobe Illustrator (. Kwete akakodzera mukati marongerwo Ndapota vanamatai kuti zvinozadzisa unyanzvi uye peji chete magwaro, kufanana Logos, Mabhachi, etc.)
• Print vakagadzirira PDFs ndimubvise chikumbiro mafaira dziri pamusoro
Tinoratidza kuti iwe ushandise PostScript, OpenType kana TrueType fonts. Vamwe fonts kuti dzakaora panguva yedzimudzangara, akadai waibvira DVD kana uchiisa Via ftp. Tinokurudzira compressing fonts vasati vatumira pavo.
Havaumbi fonts kuti havana runoenzanirana aidhinda Fonts. Somuenzaniso, muna marongerwo chirongwa wako unogona sarudza "Helvetica" uye zvadaro baya munhu "Vasingatyi" manyorero nokuti pane runoenzanirana "Helvetica Vasingatyi" purinda Fonts. Asi kana imi sarudza "Futura Heavy" uye zvadaro kushandisa "Vasingatyi" manyorero kwairi musingadi kuwana bolder shanduro kuti Fonts nekuti hapana runoenzanirana purinda Fonts.
Tinoratidza kuti wasarudza Fonts uchida zvakananga Sarudza Muterere pane kusarudza nechigadziko Fonts uye kushandisa imwe manyorero. With fonts guru kuti ane zviyereso zhinji ekupedzisira unyanzvi anogona kuita migumisiro ako nezvimwewo.
Kana kuisa hwako Fonts ruvara, ndapota kuchengeta mirayiro izvi mupfungwa:
8 pt. pa 100% zvokufonongonwa ruvara.
12 pt. pa 60% 80% ruvara
16 pt. pana CMYK ruvara. Maduku CMYK Fonts kuchaita kudhinda pamwe kuenzana mativi uye kuzviratidza damerau (kana kubvisa remazita) nokuti Dots anodhindwa sezvo sikirini.
Chokunyengera ari kuvakoka munhu kwakajeka kana mufananidzo nokuda 0.25pt kudzivisa chero chena denderedzwa rechiedza kana gwanza vakapoteredza mufananidzo kana kwakajeka. Kazhinji muitiro Mavara hazvidi vava parumananzombe, kunyange pane dzimwe anosiyiwa. InDesign akaita preset musungo Kurongwa, kazhinji haufaniri kunetseka chokunyengera.
Unofanira kungwarira chokunyengera paunenge kugogodza kunze chifananidzo kana kugadzirwa chinhu kubva hwakasimba background. Pane nzira mbiri kudzivisa chena denderedzwa rechiedza, kana zvinhu zvinoita misregistration, nokushandisa yakarurama chokunyengera kana overprinting. Overprinting pachii wenyaya kana matete Graphics kana mitsetse, asi yeuka kuti overprinting kuchawedzera kuti basa Ruvara chinhu kusvikira runotikurudzira ruvara uye kungaita chinhu ruvara.
Kana uine zvakasvibirira chinyorwa (c: 95, m: 0, y: 80, K: 0) agere pamusoro rutema (c: 95, m: 20, y: 10, K: 0) nechekumashure, mukasadaro vanofanira musungo nokuda yakasimba cyan kumashure UYE kana rugwaro iri 16 pt. kana duku unofanira kuisa mashoko kuti OVERPRINT.
Hi res mufananidzo mafaira vanofanira kugara pasi sezvo tiff, PSD, AI kana EPS mafaira. Chinhu chinokosha pane unhu kubereka ndeyekupedzisira faira saizi. All mafaira mufananidzo kunofanira 300 DPI (Dots pa padiki) uye mutsetse uri zvinofanira 1200 DPI panguva yokupedzisira saizi.
A mufananidzo guru tarisa pa 150 DPI ndivo vakuru yakaenzana chifananidzo hafu kuti saizi kuti tarisa pa 300 DPI. Vose kuchaguma faira riri nehasha akaenzana.
Paunenge uchigadzirira wako mufananidzo mafaira unofanira akakunda kurudyi huwandu mashoko. Kana mafaira ako madiki vanoonekwa blurry kana pixelated. Kana vachiri guru vakaita kuti imagesetter basa kukuomerai kana anogona kugadzira Postscript kukanganisa.
Images asingasviki 300 DPI (kana 1200 DPI kuti mutsetse uri) achaita chikanganiso panguva preflight muitiro. All mhoro-res mifananidzo vanofanira akamisa sezvo CMYK, uye kwete zvakawanda + pane 15% kana -15% of kubereka saizi. Artwork paIndaneti kubva yepaIndaneti rinowanzova zvokutadza yakaderera-chisarudzo anodhinda kubereka. Dzivisa kushandisa mitsetse mukati mifananidzo zviri wakawondereiko kudai mazuva ose pane .5 pfungwa.
Mifananidzo yose inofanira pasi sezvo CMYK, kwete RGB format. ruvara All zvinofanira retouched uye ruvara kururamiswa Photoshop asati mifananidzo vari kutorwa kupinda InDesign.
Raster kana bitmap mifananidzo huri muchimiro duku dzinoungana mu afoot akaita muenzaniso, rinozivikanwa pixels, kumiririra Graphics. Pixel nomumwe ari bitmap nomufananidzo ane kwaanogara uye ruvara ukoshi basa nayo. The inonyanya faira mhando vari tiff, EPS kana Photoshop PSD mafaira.
Paunogadzirira mufananidzo mafaira kuti anodhinda kubereka unofanira inenge nguva zvibereko tiff mifananidzo kana PSD mafaira. Tiff mafaira aya anonyanya, uye vari pachena format, izvo zvinoreva kuti inogona kushandiswa InDesign kana Quark. PSD mafaira anogona chete kushandiswa Adobe Photoshop chirongwa.
Chimwe zvakafanana mufananidzo faira ari jpeg. Zvikurukuru kushandiswa mapikicha, jpeg mumwe maviri nevakawanda faira zvinogona kushandiswa padandemutande. Zviri pamanyorerwo compressed saka ruzivo akarasika panguva compression. Kana uine jpeg faira muchida kushandisa kudhindwa, kurivhura muna Photoshop uye kusarudza: Image-> Mode-> CMYK Color (kana Grayscale).
Zviri chakaipa resample kubva mufananidzo guru kune munhu maduku chete. Photoshop anongoti vanorasira kunze zvokuwedzera pixels uye chifananidzo vachaonekwa maduku uye ose ikakuruma sezvo unopinza sezvazvaiva kare.
Zviri HAKUNA A AKANAKA PFUNGWA kuti upsample kubva mufananidzo chiduku yakakura chete. Pakadaro, Photoshop anowedzera pixels kuti mufananidzo. Chirongwa ibasa ruvara kuti pixels izvi idzva kwakavakirwa noruvara yakavakidzana pixels. Izvi zvinogona chifananidzo riri blurrier kupfuura yepakutanga, sezvinoratidzwa kurudyi.
Never pasi GIF mufananidzo mafaira kuti anodhinda kugadzirwa.
Black uye White Images
Zvichienderana ramunoda, unogona kumisa zvifananidzo zvenyu sezvo 1 ruvara rutema uye chena, duotones, kana 4 ruvara CMYK mifananidzo.
1 ruvara rutema uye chena mufananidzo rinoumbwa kazhinji kushandisa urongwa dema. Muchidimbu uye mimvuri akamisa grayscale.
2 ruvara rutema uye chena mufananidzo vari akamisa kushandisa muitiro dema uye PMS ruvara. The PMS runogona kushandiswa kushandisa sepia ruvara kana PMS ndachena kuumba mamwe mashoko ari grayscalefrom pfungwa huru kuti mimvuri.
4 ruvara rutema uye chena vakasikwa kushandisa CMYK uye anopa zvikuru zvakadzama kubva huru kune mimvuri. 4 ruvara mifananidzo matema uye chena vanoda kuputsika chaizvo pachiyero. Kana kuisa mafaira ako, unofanira kuva nechokwadi chokuti hapana ruvara vakakanda dzako mifananidzo. Unofanira kubvisa chakakandirwa Photoshop pamberi pechifananidzo iri kutorwa kupinda InDesign.
Output ose vector mafaira sezvo EPS kana AI (Illustrator). Iva nechokwadi kuti panguo ruvara mazita ari mafaira aya mazita chete mavara ari marongerwo software.
Dzimwe shanduro Adobe Illustrator kukubvumira kusimudza kana tikarega Adobe Illustrator kuti default goho chisarudzo. Regai chinja ezvinhu ichi. Achideredza chisarudzo kuchaita mumakwara havaratidzi kuumbwa. Kurera kuti kupa zvisingakoshi zvikanganiso panguva preflight.
Save mutsetse uri mafaira sezvo bitmapped mifananidzo. Kana iwe kuponesa grayscale, kumicheto anogona goho ane rasterointi chidzitiro achivafambisa kuoneka blurry kana asina kuenzana.
Uchishandisa Black Ink nezvishoma
Kana guru nharaunda zvokufonongonwa matema achange kuyambuka vamwe vakavaka tints, pachava kusiyana arambe achirema pakati munzvimbo pamusoro ruvara uye avo kuti havasi pamusoro ruvara. Mhinduro iri kuvaka "akapfuma dema" tint kunovhengana sezvinotevera:
Muchishandisa ichi akapfuma nhema tichadzivisa chero pachena arambe achirema zvakasiyana nezvishoma dema. Zviri zvakare nzira yakanaka mukubudisa gobvu, yakafanana rakasimba dema, kunyange kana haangakanganwirwi kuyambuka mamwe mavara.
Other matema zvinhu zvakadai mitemo, mhando, uye dzakaonda mufananidzo zvinhu zvinofanira rinoumbwa 100% vatema uye akakudza kuti overprint.
Funga kuwedzera varnish pamapeji kuti vari zvakasimba rima ruvara kutarisana chena peji kudzivirira akaenda.
Kusunungura Project Your
Usati vatumira mafaira ako, tapota kushandisa Preflight murayiro muna InDesign kuti aone mafaira ako.
• mifananidzo chete kuti vari kushandiswa marongerwo. Iva nechokwadi mazita uye nzvimbo kwakabatana mafaira handishanduki mushure iwe kuunganidza mafaira ako.
• All bitmapped mufananidzo hukuru vanofanira zvinenge 300 DPI, uye zvose Vector mutsetse uri mafaira vanofanira kanenge 1200 DPI
• tiff uye EPS mafaira inofanira CMYK, kwete RGB. Mifananidzo yose sezvo tiff, uye zvose Vector mutsetse uri sezvo EPS.
• Tumirai zvose fonts inoshandiswa, pamwe kwavo runoenzanirana aidhinda fonts, kunyange kana Sarudza inowanzoshandiswa.
• Bvisa tsva mavara ose. InDesign kuti ruvara palette ane "Sarudza tsva All" Ipfungwa ichakubatsira kuwana uye zvinomuomera kuikanganwa Swatches izvi.
• Iva nechokwadi mumwe ruvara ane zita rimwe chete.
• husava netwakawanda-wanda kuti Graphics kushandisa shoma kuwanda kwenhambwe ari sanganisa kana zviduku nhamba pfungwa munzira.
• Ivai nechokwadi Photoshop magwaro hadzirishandisi tsva kana zvakavanzika akaturikidzana. Zvikasadaro, achibvarura zvikanganiso kunogona kuitika uye yakavanzwa akaturikidzana anogona goho uye pakusika zvisingatarisirwi zvabuda.
• Bvisa tsva okunze ari pasteboard kana zvinhu kuti zvakavigwa vamwe zvinhu.
• mapeji All vanofanira Trims uye bleeds (bleeds vanofanira kuwedzera 3mm kana 1/4 "mhiri Trim vose 4 rwemberi).
• Tumirai yakaderera res PDFs kuti placement uye / kana Laser printout. Nyora peji nhamba pamusoro lasers kana folios regai kudhinda kana yakaderera res PDFs kuti placement.
• Tumirai vakaparadzana chikumbiro kana PDF mafaira kuti rugwaro uye kufukidza nyaya zvimwe zvinoriumba (endpapers, ndichisunga, etc.)
• Color kutungamirirwa, kana uri kugoverwa.
Unogona pasi mafaira ako Via wetransfer, Hightail kana zvimwe paIndaneti faira kugoverana papurogiramu, kana inotakurika ngarurege (nechokwadi kuti anosanganisira waya kubatanidza kuti kombiyuta). Submit InDesing kana mhoro-res kudhinda vakagadzirira PDFs pamwe Trim mavanga uye bleeds zvaisanganisira.
Nokuti mamwe mashoko pamusoro mamisirwo PDFs, tapota enda Adobe rubatsiro nzvimbo: https://helpx.adobe.com/indesign/how-to/indesign-create-pdf-for-print.html?set=indesign-get -started-zvinokosha-beginners